I-IMEX BuzzHub Live entsha ibonelela ngefestile kwihlabathi le-IMEX yaseMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » I-IMEX BuzzHub Live entsha ibonelela ngefestile kwihlabathi le-IMEX yaseMelika
I-IMEX America BuzzHub Imodareyitha ephilayo uSuzanne Medcalf Mulligan, uMphathi oPhezulu wokuBambisana noLuntu, iQela le-IMEX.
“'Kuhlala kukho isihlalo etafileni yethu'- le yimantra yethu kwaye sisebenzele ukuqinisekisa ukuba i-IMEX America ihlala ibandakanya kwaye ifumaneka kubo bonke. Njengenxalenye yoku, siphehlelela istudiyo sethu sokuqala sosasazo kumgangatho womboniso sihambisa umxholo obukhoma kunye ne-bespoke kwabo bangakwaziyo ukusijoyina ngokobuqu kwindawo. ” UCarina Bauer, i-CEO yeQela le-IMEX, wazisa i-IMEX BuzzHub Live evela kwi-IMEX yaseMelika, exhaswe ngu-Notified.
Ukusasaza kuzo zonke iintsuku ezimbini zokuqala ze-IMEX America iya kuba yimfundo ephilayo, iingxoxo zephaneli, imisebenzi yempilo, kunye nokubonisa amanqaku aphezulu.
Iiyure ezine zomxholo wasimahla ziya kubonelelwa ngosuku ngalunye, zifikeleleke ngokubhalisela i-IMEX BuzzHub.
Iya kuba yinkqubo egcweleyo yomxholo, edityaniswe endleleni ziinkokeli zeshishini.
Imfundo ephilayo, iingxoxo zephaneli, imisebenzi yempilo kunye nemiboniso ebalaseleyo yomgangatho iya kusasazwa kuzo zonke iintsuku ezimbini zokuqala zomboniso: NgoLwesibini, ngoNovemba 9, nangoLwesithathu, ngoNovemba 10. Kuya kubakho iiyure ezine zomxholo wasimahla suku ngalunye ukusuka kwi-9am-1pm PST. , ifikelelwe ngu bhalisa ye-IMEX BuzzHub.
Usihlalo we-IMEX uRay Bloom kunye ne-CEO uCarina Bauer uya kusungula i-IMEX BuzzHub Live ngo-9am PST/5pm GMT. Imodareyitha uSuzanne Mulligan, uMphathi oPhezulu wokuBandakanya koLuntu lwe-IMEX, uya kuthi emva koko akhokele ababukeli ngenkqubo egcweleyo yomxholo, edityaniswe endleleni ziinkokeli zeshishini.
Ezi ziquka umgca we-stellar-up of IMEX America izithethi ezifana: Bob Bejan (Microsoft), Julius Solaris (Hopin), Juliet Tripp (Chemical Watch), Daniel Fox (umhloli wentlango yedwa kunye nombhali), uNicola Kastner (SAP), uGreg Deshields (Tourism Diversity Matters), Sonali Nair (MPI Toronto) kunye noMelissa Blackshear (Maritz). Iingxoxo zephaneli ziya kudibanisa ezinye zezi ngcali ukuze zixoxe ngemiceli mngeni yamva nje kunye neendlela ezihamba phambili ukusuka kumgangatho womboniso kubandakanya uyilo lomnyhadala, itekhnoloji, izifundo ezisuka kubhubhane, iyantlukwano kunye nendlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo. Iintatheli ezijikelezayo ziza kubonisa ezinye zezinto ezintsha kunye nobuso kumboniso kwaye zikhangele indawo entsha yomboniso, iMandalay Bay.
UCarina uhlabela mgama esithi: “I-IMEX BuzzIHub Live yifestile kwihlabathi le IMEX yaseMelika kwaye ngelixa siqonda ukuba ayinguye wonke umntu oza kukwazi ukujoyina thina ngokobuqu, sifuna ukukwazi ukubonelela ngencasa yomsitho ophilayo. Wonke umxholo ugcinwe ngokukodwa kwi-BuzzHub kwaye kuya kubakho amathuba amaninzi kubabukeli - naphi na apho bakhoyo emhlabeni - ukuba bahlanganyele nathi ngesikrini esincinci. "
I-IMEX BuzzHub Live evela kwi-IMEX yaseMelika ixhaswe nguKwaziswa kwaye iyenzeka ngoNovemba 10 & 11. Bhalisa mahala apha.
I-IMEX America iyenzeka ngoNovemba 9 - 11 eMandalay Bay eLas Vegas kunye ne-Smart Monday, inikwe amandla yiMPI, ngoNovemba 8. Ukubhalisa-simahla-cofa Apha. Ngolwazi oluthe kratya malunga neenketho zokuhlala kunye nokubhukisha Apha. Iibhloko zamagumbi amaxabiso awodwa zisavuliwe kwaye ziyafumaneka.